Shuruudaha waxbarashada carruurta | Bezzia
Maria Jose Roldan | 18/06/2022 12:31 | Carruurta wax baro
Inkastoo waalidiin badan laga yaabo inay u maleynayaan taas lidkeeda, Shuruudda korinta carruurta maaha mid lagu talinayo gabi ahaanba. Ujeedadu waa in la gaaro meel dhexe, aan aad u badnayn ama aad u yar.
Maqaalka soo socda waxaan ku cadeyneynaa dhammaan shakiyada laga yaabo inaad ka qabtid shuruudaha waxbarashada iyo sida loo dhaqan geliyo.
1 Maxaa looga baahan yahay?
2 Waqtigee ayaa shuruudda loo arkaa mid xad dhaaf ah?
3 Fasalada waalidka iyadoo loo eegayo baahida la siiyay
4 Goorta la dabacsanaan karo barbaarinta
Furaha wax walba waa ogaanshaha sida loo dabaqo shuruudahan oo kale xagga waxbarashada carruurta yaryar. Guud ahaan, shuruuddu waxay ka caawin kartaa ilmaha inuu wax u qabto si habboon oo habboon. laakiin mararka qaarkood dalabka noocaas ahi waxa uu ilmaha ku dhalin karaa cadaadis xoog leh oo aakhirka saamaynaya shucuurtiisa. Taasi waa sababta ay runtii muhiim u tahay in la isku dheelitiro waxa loo baahan yahay oo la helo waxbarashada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee carruurta.
Waqtigee ayaa shuruudda loo arkaa mid xad dhaaf ah?
Dalabka ayaa ah mid xad dhaaf ah marka ilmaha la cadaadiyo oo uu ka xumaado in uusan buuxin rajooyinka la abuuray. Shuruuda laga rabo waa inay lahaataa ujeeddada wax loo baro ilmaha oo aan lagu cadaadin kahor wax kasta oo uu samaynayo. Cawaaqibta ka dhalan karta dalabaadka xad-dhaafka ah ee carruurta waa kuwan soo socda:
Isku kalsooni yaraan.
Cabsida iyo cabsida niyad jabka.
Hab-dhaqanka iyo xumaanta.
Walwal iyo walaac.
Dhibaatooyinka la xiriira carruurta kale.
xaalad niyad jab leh.
Fasalada waalidka iyadoo loo eegayo baahida la siiyay
Waxaa jira saddex nooc oo waalid ah iyadoo loo eegayo dalabaadka xad dhaafka ah ee la saaray carruurtooda:
Marka ugu horeysa waxay ahaan lahaayeen kuwa loo yaqaan waalid adag. Fasalkan waalidiinta ah ayaa caado u ah ciqaabta oo aad bay ugu daran yihiin marka ay timaado waxbarashada caruurtooda. Waxay si cadaalad ah u xakameeyaan nolosha caruurtooda, marka ay la kulmaan khaladaadka iyo khaladaadka waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo aan dulqaad lahayn oo aan is-beddel lahayn.
Nooca labaad ee waalidiinta waa kuwa leh rajooyin sare. Waxay carruurtooda ka filayaan natiijooyin cajiib ah oo mararka qaarkood noqda kuwo aan la gaadhi karin. Waxaas oo dhan waxay ka dhigan tahay in heerka niyad-jabka carruurtu uu aad u sarreeyo. oo si joogta ah u qabta cadaadis sare.
Nooca saddexaad ee waalidku waa feejignaan. Waa kuwa si joogta ah ula socda caruurtooda oo si xad dhaaf ah u ilaaliya si aysan u helin madax-bannaani iyo madax-bannaani marka ay timaaddo wax-qabad. Xakamaynta iyo ilaalinta xad-dhaafka ah ee noocan oo kale ah waxay inta badan cawaaqib xun ku yeeshaan korriinka niyadeed ee carruurta.
Goorta la dabacsanaan karo barbaarinta
Marka dhamaadka todobaadka yimaado waa inaad taqaanaa sida loo dhigto baahida iyo Aad ula dhaqanto carruurta.
Shuruudda laguma talinayo marka carruurtu aad u yar yihiin.
Haddii ilmuhu aad u nugul yahay Waa in aad u dabacsanaato hab-dhaqankaaga.
Waxba ma dhacaan sababtoo ah carruurtu waxay sameeyaan khaladaad. Qaladaadku waa lama huraan marka ay timaado waxbaridda kuwa yar yar.
Ma noqon kartid wax door ah marka ay caruur yihiin waxay ciyaarayaan ama ku raaxaysanayaan waqtigooda firaaqada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Carruurta wax baro » Shuruudda waxbarashada carruurta